Nezvedu - Great Kunakidzwa Amusement Equipment Co, Ltd.
Isu tinoita zvatinokwanisa kuita kuti hupenyu hwako huve hwakazara nekunakidzwa
Great Fun Amusement Equipment Co, Ltd.
Great Fun Amusement Equipment Co, Ltd (GFUN) iri muNantong City, Jiangsu Province, isu tine makore gumi ekuziva mukugadzirwa kwezvinhu zvekuvaraidza. Iyo kambani inoshandira mukugadzirwa kwezvinhu zvekufambisa zvisiri zvemagetsi, zvigadzirwa zvemvura yemafaro, zvigadzirwa zvemvura paki, zvishandiso zvevana, mukati memidziyo yevana yekushambadzira vana, zvishandiso zvekunze zvevana, zvishandiso zvekunze zvekushandisa uye zvakajairidzwa zviridzwa. Isu tiri yakazara yakakwana yeamusement Equipment kambani, inopa vatengi nekutsvaga uye kuvandudza, dhizaini, kugadzira, kutengesa, kuisa, basa uye zvakagadzirirwa mabasa.
GFUN inogara ichiteedzera kumusika uye inoshuvira kusangana nezvinodiwa zvevatengi vayo. Mienzaniso yechigadzirwa inosanganisira paradhiso yevana, naughty castle, yemukati yekuwedzera zvishandiso, network tambo yekuongorora park vifaa, musanganiswa masiraidhi, uye midziyo yekuvandudza yemuviri epaki yemusoro. Midziyo yeparadhiso, zvishandiso zvekunze zvekunakisa, mapaki emvura, zvigaro zvekunze zvekuzorora, mabhagi emarara, makamuri ekuchengetedza, kunyanya ezve real estate, kindergartens, nharaunda, mapaki, mahotera, vashanyi nzvimbo dzekushanyira, mapaki emvura uye dzakasiyana-siyana themed. Kambani yedu inokwanisa kuwedzeredza nzvimbo dzakasiyana dzemafaro uye zvigadzirwa zvedu zvakaendeswa kune nyika dzinopfuura makumi maviri nematunhu muEurope, Russia, Middle East, Southeast Asia ne Africa. Isu tinovimbwa zvikuru uye tinorumbidzwa nevatengi vedu, uye maketeni anotsigira ekutsigira ndiwo emhando yepamusoro.
Kuvimbika, simba uye zvigadzirwa zvemhando yeGFUN zvakave zvichizivikanwa neindasitiri, uye shamwari dzinobva kumafambiro ese ehupenyu dzinogamuchirwa kutaurirana bhizinesi nesu.
☆. Makore gumi ekugadzira ruzivo mune yekuvaraidza michina indasitiri.
☆. Mazhinji ezvebudiriro kesi.
☆. Professional timu inopa rubatsiro rwehunyanzvi kune vatengi.
☆. Tinogona kupa zvigadziro zvemutengi wedu zvemahara.
☆. Zvese zvakatogadzirwa zvezvigadzirwa zvedu zvakachengetedzwa uye zvese zvemidziyo yedu zvakapfuura chitupa cheEC.
☆. Vashandi vedu vetechnical vashandi vanoenda kunobatsira watejasto kukwazisa kuiswa mune dzese nyika.
Sei Sarudza GFUN?
OEM & ODM Inogamuchirika
Iyo kambani yakazvipira kuunza zvigadzirwa zvepamusoro-soro zvekugadzira uye kugadzira tekinoroji, chete zvigadzirwa zvepamusoro zvepasirese zvekugadzira zvigadzirwa, zvekuti mhando yemidziyo yemitambo yakavandudzwa.
Kwemakore akawanda kambani yedu yakadzokorora kuwana nyika, matunhu pamwe nemasipureti muindasitiri, Attract yekutamba nzvimbo yekutamba ndeimwe yemakambani akanakisa muindasitiri yepasi rese inoshanda nemhando yepamusoro yepamusoro.
Tine makore gumi eruzivo mukugadzira zvigadzirwa zvemufaro, zvese zvigadzirwa zvezvigadzirwa zvedu ndezvekuchengetedzwa kwenzvimbo uye zvishandiso zvedu zvakapfuura chitupa cheEC, ISO9001 yenyika mhando system certification uye ISO14001 yepasirese kuchengetedzwa kwemaitiro ezvekudzivirirwa enzvimbo uye nyika yepasirose yekugara hutano system OHSAS chitupa.
Masikirwo akagadzirwa uye maumbirwo anowanikwa. Kugamuchirwa kugovera pfungwa yako nesu, ngatishandei pamwe kuti tiite hupenyu kuve hwekugadzira
Mhando dzakanaka dzinotsigirwa nehukama tsika. Isu tinonyatsonzwisisa kuti chete kuburikidza nekuenderera mberi pesvedzero, kupinza uye kubatanidza kunogona kuumba yehukama tsika. Kwemakore, kusimudzirwa kwekambani kwave kuchitsigirwa neyekwakakosha tsika-- kutendeka, hunyanzvi, basa, kushandira pamwe.
Iyo kambani inogara ichiteedzera kune nheyo dzevanhu-inotungamirwa, kushanda yakatendeka, kunaka kwekutanga, uye kugutsikana kwevatengi.
Iko kukwikwidza mukana wekambani yedu mweya wakadaro, isu tinotora matanho ese ane chimiro chakasimba.
Kuvandudzwa ndiwo musimboti wetsika yechikwata chedu.
Kuvandudzwa kunounza budiriro, kunounza simba, Zvese zvinobva pakutsva.
Vashandi vedu vanogadzira ruzivo, maitiro, tekinoroji uye manejimendi.
Kambani yedu inogara ichishandira kuenderana neshanduko muitiro uye zvakatipoteredza uye kugadzirira inobuda mikana.
Kuita basa kunopa kutsungirira.
Boka redu rine pfungwa yakasimba yekutakura uye basa kune vatengi uye nzanga.
Simba reiri basa harioneke, asi rinogona kunzwiwa.
Chave chiri kutyaira kwekuvandudzwa kwekambani yedu.
Kubatana ndiko kunopa budiriro, uye kugadzira kukunda-kuhwina mamiriro pamwe kunoonekwa sechinangwa chakakosha chekusimudzira bhizinesi. Kuburikidza nekubatana kwakanaka mukutenda kwakanaka, tinotsvaga kubatanidza zviwanikwa uye kusimbisana kuitira kuti nyanzvi dzipe kutamba kwakazara kuhunyanzvi hwavo
Kana iwe uchifarira chero zvigadzirwa zvedu, ndapota inzwa wakasununguka kutibata nesu kuti ubvunze.